Yuunvarsiitiwwan ergamaa fi xiyyeeffannaan gara kaayyoo isaanitti ariitiin kan galan ta’uun ibsame – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Yuunvarsiitiwwan ergamaa fi xiyyeeffannaan gara kaayyoo isaanitti ariitiin kan galan ta’uun ibsame
On Oct 18, 2020 132
Finfinnee, Onkololeessa 8, 2013 (FBC) – Yuunvarsiitiwwan ergamaa fi xiyyeeffannaan gara kaayyoo isaanitti ariitiin kan galan ta’uun ibsameera.
Ministirri Ministeera Saayinsii fi Dhabbilee Barnoota Olaanoo Dooktar Saamu’eel Hurkatoo,yuunvarsiitota gama xiyyeeffannan adda baasuun badhaadhina biyyaatti milkeessuuf kan gargaaruu ta’u himaniiru.
Dhaabbileen barnootaa itti gaafatamummaa itti kenname haalaan ba’uun fakkeenya ta’anii humna namaa dorgomaa diinagdeen Ityoophiyaa barbaaduu oomishuu akka qabanis himaniiru.
Ministir deettaan Ministeera Saayinsii fi Dhaabbilee Barnoota olaanoo Dooktar Muluu Naggaa , kaayyoon yuunvarstoota adda baasuu yuunvarsiitota wal caalchisuuf osoo hin taane kallatti xiyyeeffannaa qaban irraa ka’uun bu’aa qabeessa akka ta’aniif ta’uu himaniiru.
Akkaata wixinee bu’aa qorannoo barnootaa fi leenjiitti yuunvsarsitiin 8 yuunvarsiitii qorannoo,15 Appilaayid Saayinsii (applied science), 2 saayinsii fi teeknooloojii akkasumas kan hafan 21 immoo yuunvarsiitii waliigalaa jedhamanii adda baafamuu ragaan Ministeericharra argame ni muul’isa.
Hoomaan Awwaanisaa aanaa Minjaar Shankoraatti muudatee oomisha lafa hektaara kuma 12…
Naannoo Amaaraatti mariin Proojektoota misooma Jallisii fi Hidhaaleerratti…
Obbo Gadduun Ministir deettaa Ministeera Alaa Kooriyaa Kibbaa waliin mari’atan
Miidhaa dubartootaa fi daa’immanirra ga’uu haala ittisuun danda’amurratti ogeeyyiin…
Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa FDRI walga’ii 5ffaa bara…
Walga’iin 5ffaan bara hojii 6ffaa Mana Maree Bakka Bu’oota…
Finfinneetti boruu irraa eegalee awutobisoonni 560 gara…
Yuunvarsiitiwwan ergamaa fi xiyyeeffannaan gara kaayyoo…
Hoomaan Awwaanisaa aanaa Minjaar Shankoraatti muudatee…
Naannoo Amaaraatti mariin Proojektoota misooma Jallisii fi…
Obbo Gadduun Ministir deettaa Ministeera Alaa Kooriyaa…
Oduu biyya keessaa3301